Wiil Soomaali ah oo gurigii Trump habeen seexday(sheeko aad u xiiso badan iyo ambakaak) - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Wiil Soomaali ah oo gurigii Trump habeen seexday(sheeko aad u xiiso badan...
Wiil Soomaali ah oo gurigii Trump habeen seexday(sheeko aad u xiiso badan iyo ambakaak)
Koox qaxooti ah ayaa joogay oo labo habeen seexday guri uu madaxwayne Trump yaraantiisii degnaan jiray oo ku yaalla magaalada New York.
Arrintan ayaa qeyb ka ah ficilada la doonayo in lagu bidhaamiyo dhibaatada dadka ka soo cararaya dagaalada iyo cadadiska guud ahaan calamka,wxa sidaasi Isniintii sheegtay hay’ad samafal.
Sida ay qortay wakaalada wararka ee Reuters, hay’adda samafalka ee Oxfam ayaa sheegtay inay kireysay guri islamarkana ay ku casuuntay qaxooti ka soo kala jeeda dalalka Somaliya, Vietnam iyo Suuriya taasi oo ay uga gol lahaayeen baaq ay u dirayeen madaxwayne Trump iyo hogaamiyayasha kale ee caalamka in ay taageeraan qaxootiga.
Arrintan ayaa lagu soo beegay markii uu magaalada New York ka socday shirka golaha guud ee Qaramada Midoobay.
Waxaa ka mid ahaa dadkaasi qaxootiga ah ee seexday gurigii uu ku soo koray Trump wiil Soomali ah oo lagu magacabo Cabdi Iftiin.
Maamulka madaxwayne Trump ayaa soo saaray mamnuucid u ku soo rogay dadka soo galaya Mareykanka ee ka imanaya 6 dal oo badankood ay yihiin Muslimiinta,waxa ay sidoo kale Mareykanka xaddideen tirada qaxootiga ay qaabilayaan.
“Noolasha ayaa ah mid liidata inaga oo sugayna bal in madaxwayne Trump iyo hogaamiyayaasha kale ay fuliyaan waajibaadka ka saaran sare u qaadida xuquuqda qaxootiga iyo dadka kale ee barakacay,” waxaa sidaasi sheegtay Shannon Scribner, agaasimaha hay’adda Oxfam.
Trump ayaa ku noolaa guri ka kooban 4 qol oo uu abihii Fred dhisay kuna yaalay goobaha ay degan yihiin dadka hantida leh ilaa uu ka gaarayay dad’da 4 sano.
Gurigan uu Trump yaraantiisii ku noolaan jiray ayaa la sheegay in uu gatay nin kale oo bishii March si xaraash ah ugu iibsaday $2.14 milyan islamarkana imika ah guriyo la kireysto.
Hay’adda Oxfam ayaa sheegtay in shaqalaheeda ay gurigan ku dhajiyeen roog ay ku qoran tahay “Qaxootiga ha soo dhawaado” waxaa sidoo kale dibadda daarta lagu dhajiyay isla halku-dhigaasi.
Hay’adda ayaa sheegtay in halkii dabaq ba ay 4 qof oo qaxooti ah wada wadaagayeen.
Cabdi Iftin ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu noolal cusub ku dhisay Mareykanka ka dib markii uu ka soo qaxay dagaalkii Soomaaliya.
“Waxaan ka soo tagay gurigeygiii iyo qoyskii aan ka dhashay,balse halkan waan dadaalayaa islamarkana caawin karaa,” waxa sidaasi ka so xigatay hay’adda Oxfam.
Hay’addan samafalka ayaa sheegtay inay rajeynayso in mashruucan uu wax ka tari doono arrintan la siyaasadeeyay islamarkana laga buuxiyay quraafad, beenta iyo cabsida.
Maxkamada ugu sareysa Mareykanka ayaa lagu wadaa inaya dhageysi muhim ah ay qabato taasi oo lagu eegayo sharci ahaanshiyaha mamnuucida muranka bada dhalisay ee uu Trump ku dhawaaqay bishii October.